Deg Deg Iska Hor Imaad Dhex Maray Ciidamada Booliska Magaalada Laascaanood Iyo Bulshada Magaalada Iyo Khasaaraha Ka Dhashay+Sawiro | Saxil News Network
Deg Deg Iska Hor Imaad Dhex Maray Ciidamada Booliska Magaalada Laascaanood Iyo Bulshada Magaalada Iyo Khasaaraha Ka Dhashay+Sawiro
September 4, 2016 - Written by Abdisalaan Harir
Hargeysa(Saxilnews) War deg deg ah oo hadda naga soo gaadhaya magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool soona gaadhay xafiiska shabakada Saxilnews ayaa sheegaya in maanta iska hor imaad dhex maray ciidamada booliska magaalada laascaanood iyo bulshada magaalada.
Waxaana iska hor imaadkani dhashay sida naloo sheegay kadib markii ciidamada boolisku ay dileen wiil dhalinyaro ah taaso oo aan ilaa hadda la garanayn sababta dhalisay dilkan,waxaana arinkaasi ka gadooday shacabka magaalada iyaga oona shacabka magaaladuna sida naloo shegay weeraray xarumaha ciidamada.
Intaasi ka dib waxa halkaasi laba dhinac ba ku dhex maray iska hor imaad sababaya khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh.
Khasaarha ka dhashay iska hor imaadkan ayaa naloo sheegay inay yihiin dhimashada laba qof oo shacaba iyo hal askari iyo tiro kale oo dhaawaca,waxana hakad galay isku socodkii gaadiidka iyo dadka.Sidoo kalena shacabkii gadoodsanaa aya dab qabadsiiyeen gadiidkii ciiidanka oo yaalay saldhiga hortooda.
Waxii faahfaahina ee kasoo baxa iska hor imaadaakasi kala soco shabakadda Saxilnews